यी हुन कोरोना पोजेटिभ सांसदहरु, कसलाई कस्तो छ ? « Ok Janata Newsportal
यी हुन कोरोना पोजेटिभ सांसदहरु, कसलाई कस्तो छ ?
काठमाडौं । संसद्को विशेष अधिवेशनअघि स्वाब संकलन गरिएका १२ सय ३५ मध्ये १६० जनामा कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) संक्रमण पुष्टि भएको छ।
स्वाब संकलन गरिएका मध्ये ११.९७ प्रतिशतमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको संघीय संसद् सचिवालयले जनाएको छ।